Kheyre “Ma jiro askari aanan Mushahar siin-COD • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Kheyre “Ma jiro askari aanan Mushahar siin-COD
March 19, 2019 - By: Abdirisak Faamoos
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa si caro leh uga hadlay warar maalmihii lasoo dhaafay la isla dhexmarayay oo sheegayay in askar ka cabanaysa mushahar la’aan ay gadood ka sameeyeen deegaano kamid ah gobolka shabeellaha hoose.
Ra’iisul wasaare Kheyre oo u muuqday mid ka jawaabayay gadoodkaasi ayaa sheegay in haba yaraate aysan jirin askar aan mushaharaad la siin isla markaana xukuumadda uu hogaamiyo ay xil weyn iska saartay bixinta mushaharaadka ciidanka.
Waxa uu sheegay in ay jiraan tiro yar oo ciidanka kami ah kuwaas oo aan la diiwaan gelin isla markaana aan qaadan mushaharaadka hase ahaatee inta badan ciidamada kala duwan ee dowlada ay bil walba u xaadiraan xuquuqdooda.
Waxaan rabaa horta inaan idiin sheego sidii aan u nimid askari walba waxa uu heli jiray xuquuqdiisa wuuna heli doonaa laakin waxaan rabaa inaan taliyayaasha caawa iyo ciidamada halkan jooga inaan runta isku sheegno idinkuna aad markhaati noo noqotaan laydinlama hadlee waxaan rabaa inaad i dhagaysataan
Isagoo ka hadlayay habka ay xiligan mushaharaadka u qaataan ciidanka iyo hadii ay jiraan dowlado wali dhaqaale ku bixiya ayuu sheegay in haba yaraatee xiligan aysan jirin dowlado mushaharaad siiya ciidanka isagoona taa badalkeeda xukuumadda uu hogaamiyo ku tilmaamay mid ciribtir ku sameysay musuq horey loogu sameyn jiray xuquuqda ciidanka.
Mushaharaadka ciidamada awal waxaa bixin jiray dowladaha Mareykanka,Imaaraadka iyo Turkiga waxa ay ku bixin jireen balaayiin dollar lakin hada lacagtii ay bixin jireen iyagu ma bixiyaan ee waxaa bixiya canshuurta laga soo uruuriyo shacabka Soomaaliyeed.
﻿HORSEED MEDIA 2019